Shax ahaan uga bogo saamaynta cunaqabataynta Iiraan - BBC News Somali
Hubaanti la'aan ayaa dul heehaabanaysa heshiiska nukliyeerka ee Iiraan, ka dib markii uu Maraykanku go'aansaday in uu isaga huleelo.
Heshiikii 2015kii la gaaray ayay Iiraan ku ogolaatay in ay yarayso hawlaheeda nukliyeerka iyadana laga qaado cunaqabatayntii ay saareen Qaramada Midoobay, Maraykanka iyo Midawga Yurub.
Ku dhawaaqitaankii madaxweyne Donald Trump ee ahaa in uu ka baxay heshiiska ayaa ka dhigan in Maraykanku uu soo celin doono cunaqabataynnadii.
Haddaba arrintaasi saamayn intee la eg ayay ku yeelan doontaa Iiraan iyo dalalka kale ee ganacsiga la leh?.
Wasaaradda maaliyadda ee Maraykanka ayaa sheegtay in ay wax badan isbadali doonaan 90ka iyo 180ka maalmood ee ka horreeya dhaqan galka heshiiska.
Wakhtiga la qabsaday ee 6 bisha Agoosto ayaa saamayn doona sarifashada lacagta doolarka ah, ganacsiga dahabka, noocyo ka mid ah biraha iyo sidoo kale diyaaradaha iyo gawaarida.
Tallaabada labaadna afarta bisha Novembar waxaa la bartilmaameedsan doonaa maaliyadda Iiraan iyo shirkadaheeda saliidda.
Marka ay 180ka maalmood dhammaadaanna waxaa la soo celin doonaa cunaqabataynadii shaqsiyaadka ee ay waaxda maaliyadda ee Marayku soo rogtay.
Yaa iibsada saliidda Iiraan?
Iiraan ayaa ka mid ah dalalka shidaalka ugu badan soo saara waxayna dhoofisaa shidaal ay balaayiin doolaar ka soo gasho sannad walba.
Laakiin cunaqabataynada caalamiga ah ayaa aad u dhaawacay wax soo saarka Shidaalka iyo kobaca dhaqaalaha ee dalkaas.
Inkastoo Maraykanku uusan macmiil wayn ka ahayn, haddana shirkadaha ajaaniibta ah iyo dalalka kale ee Iiraan la macaamilay xayiraadda ka dib ayaa wajihi doona cunaqabatayno uu Maraykanku saari doono, waase haddii ay ku guuldaraystaan in ay dhimaan ama ay guud ahaanba joojiyaan ganacsiyada ay la leeyihiin.
Waxaa laga yaabaa in arrintaasi ay saamayn ku yeelato shirkadaha Yurub laga leeyahay sida Total oo Faransiiska laga leeyahay oo heshiis 5 bilyan ah la gashay Iiraan heshiiskan nukliyeerka ka dib. Halka BP ay heshiis kala gashay shirkadda Shidaalka ee Iiraan si ay wax uga maamusho xarunta Rhum ee shidaal laga soo saaro.
Maxaa soo wajihi kara waaxaha kale?
Xayiraadaha ayaa sidoo kale saamayn doona waxyaabo kale oon shidaal ahayn.
Ku dhawaaqiddan ayaa saamayn doonta shirkadaha Iiraan ka gadaya diyaaradaha ganacsiga.
Shirkadaha Airbus oo Iiraan la gashay heshiis ay kaga iibinayso 100 diyaaradood iyo Boeing oo siddeetan diyaaradood kula heshiisay in ay ka gado ayaa ku waayi doono balaayiin doolar, sababtuna waxay tahay in qaybo ka mid ah diyaaradahaas lagu soo sameeyo Maraykanka.
Dalxiiska Iiraan ayaa heshiiska nukliyeerka ka faa'iiday dadka soo booqday oo 3.8 milyan ahaa 2012kii ayaa 5 milyan gaaray 2015kii, waxaana laga yaabaa in cunaqabataynta cusub ay saamayn yeelato.
Maxay yihii fursadaha kale ee bannaan?
Wali waxaa jirta rajo ay qabaan qolyaha xiriirka ganacsi la leh Iiraan, maadaama oo dalalkii kale ee qaybta ka ahaa heshiiska sida Britain, Faransiiska, Shiinaha, Ruushka iyo Jarmalka ay sheegeen in ay sii wadayaan taageerada ay heshiiskaas u hayaan.
Maraykanka oo sii kordhinaya cadaadiska cunaqabataynta Iiraan
Israa'iil oo duqaysay saldhigyada Iiraan ay ku leedahay gudaha Suuriya
Dawladda Maraykanka ayaa sheegtay in ay macquul tahay in lacafiyo qaar ka mid ah qolyaha la macaamila Iiraan, inkastoo aysan wali shaacinin faahfaahinta shirkadaha laga yaabo in ay arrintaas ka faa'iidaan.
Haddii ay taasi guuldarraysato waxaa laga yaabaa in Midawga Yurub uu soo saaro sharci cunaqabatayntaas burinaya ilaalinayana shirkadaha ganacsiga la leh Iiraan, sidii uu Maraykankuba sameeyay markii uu cunaqabataynta ka qaaday Cuba.